Liverpool oo ku guuleysatay koobka European Super Cup-ka oo ay ka badisay Chelsea… – Hagaag.com
Posted on 15 Agoosto 2019 by Admin in Sports // 0 Comments
Liverpool ayaa ku guuleysatay European Super Cup, ka dib markii ay rigoorayaal uga badisay kooxda ay isku wadanka yihiin ee Chelsea ka dib markii ay ciyaartu ku dhamaatay min labo gool, ciyaarta oo ka dhacday garoonka ‘Vodafone Arena’ ee magaalada Istanbul, dalka Turkey.
Kooxda xilli ciyaareedkii hore ku guuleysatay Champions League ayaa waxay ku guuleysteen koobkan markii afaraad taariikhdooda, iyagoo noqday kooxdii ugu horeysay ee Ingiriis ah ee ku guuleysata Super Cup tan iyo 2005, halka Chelsea rasiidkeeda uu ku joogsaday hal Super Cup.
Chelsea, kooxda heysata koobka Europa League, ayaa goolasha furtay daqiiqadii 36aad waxaana u dhaliyay ciyaaryahanka reer France Olivier Giroud, ka hor inta Liverpool aysan u barbareynin Sadio Mane bilowgii qeybtii labaad, taasoo soo gabagabeysay waqtigii asalka ahaa ee ciyaarta iyadoo barbaro fiican koox kasta la baxday.
Qeybtii hore ee waqtiga dheeriga ayaa xiddiga reer Senegal Mani uu dhaliyay goolkiisii ​​labaad asaga oo u dhiibay kooxdiisa hogaaminta goolasha daqiiqadii 95aad, balse Chelsea ayaa si dhaqso leh u barbareeyay daqiiqaddii 101aad, rigoore uu dhaliyay ciyaaryahan Jorginho oo reer Talyaani ah.
Ciyaarta ayaa ku soo idlaatay barbaro iyadoo koox walba ay dhalisay labo gool, Liverpool ayaa ku guuleysatay horyaalka iyadoo ku guuleysatay shan laad oo kuligoodu ay wada dhalisay, halka Chelsea ay dhalisay kaliya afar laad.
Waxay ahayd markii ugu horreysay taariikhda ee European Super Cup ay isugu imaadaan laba naadi oo Ingiriis ah finalka.
Sidoo kale waa Muuqaalkii ugu horreeyay ee Arbitro haweenay ah ee maamusha ciyaar final Europe ah.